1980 က ဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့တွေကတော့ အရှုံးသမားတွေရဲ့ မျိုးဆက်က အနုပညာရှင်တွေပါ။ အဲဒီမျိုးဆက်ဟာ မြန်မာအချင်းချင်း ၀ါဒမတူတဲ့သူတွေကြားမှာ ရန်သူတွေအဖြစ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ပြီး အချိန်တွေဖြုံးခဲ့တယ်။ ကချင်စစ်သား၊ ကရင် စစ်သား၊ ရခိုင်စစ်သား ၊ ဗမာ စစ်သား ဆိုပြီး တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ တော်တော်ကို စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ မျိုးဆက်ပါပဲ။ ပြည်တွင်းစစ်ထဲမှာ သေဆုံးခဲ့တဲ့သူတွေလည်း မနည်းလှပါဘူး။အခုလည်းပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အိမ်ကို လူဝင်တဲ့ကိစ္စမှာ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ . . . ဘယ်လိုကတော့ မဖြစ်သင့်ဘူး စသဖြင့် ပြေပြေလည်လည် ဆွေးနွေးရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် နအဖဘက်ကဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အသရေဖျက်ဖို့ အားထုတ်နေပါတယ်။ (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တကယ် အဖြူကောင်ကို လက်ခံသည်ဖြစ်စေ စည်းကမ်းလေးထားပြီးတော့ ဝေဖန်သင့်ပါတယ်) ဒီမိုသမားတွေကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လုပ်ရပ်ကို အမှန်အတိုင်း ဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖို့ထက် သူတို့ နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်ကိုပဲ အလေးထားပါတယ်။(မွတ်ဆလင်တွေက အဲလိုမျိုး ဖြစ်တာကို အရမ်းသဘောကျနေမှာပါ) ဘယ်နိုင်ငံရေးသမားများ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတာရှိပါသလဲ? နိုင်ငံအပေါ်မှာ သစ္စာရှိပါသလဲ? ဒီတော့ ကျနော်တို့ မျိုးဆက်သစ်တွေက လမ်းဟောင်းကို လိုက်မှာလား? ဦးဝင်းတင်ပြောသလို ဖေါက်ထွက်မလား?
May Sweet in Myanmar TV 1981
Cho Pyone on MRTV 1981
May Kha Lar on MRTV 1982
Sai Htee Saing & The Wild Ones in MRTV 1982
May Sweet in MRTV 1984
Hay Mar Nay Win in MRTV 1984
Tint Tint Tun on MRTV 1985
May Sweet in Myanmar TV 1985
Hay Mar Nay Win on MRTV 1985
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 12:31 AM